7 fursadood oo Soomaaliya u horseedI kara in si fudud ay ugu guuleysato Kenya | Waabaryay.com
Home WARARKA Wararka 7 fursadood oo Soomaaliya u horseedI kara in si fudud ay ugu...
7 fursadood oo Soomaaliya u horseedI kara in si fudud ay ugu guuleysato Kenya
Dib u dhigista kiiska Badda marka laga eego dhinacyo kala duwan; DFS waxaa ugu jira fursado ay ka faa’iideysan karto, oo guul u horseedi kara in Soomaaliya ay ka gaarto kiiskaas.
Hadii aan soo koobo waxaa ugu muhiimsan.
1) in dowladda Federaalka ah ay siiso Saammi-qeybsiga beesha degta Wajeer iyo deegaanno ka tirsan Jubooyinka, Gedo, Shabeelaha hoose iyo Bakool, taas oo loo arko hadii Dowladda Federaalka ku guuleysato in ay noqon karto mid aan lagu gorgortamin baddeenna oo dhulka ku dhararsan ay degto beeshaas, waana mid ay ku baraarugsanyihiin madaxda ugu sarreyso Kenya, maankoodana ka guuxeyso in ay jab ku tahay haddey sidaas sameyso dowladda Soomaalia.
2) Ma jiraan gole wacyi-galin ah oo arrimahaan bulshada Somaliyeed kala hadla, waana arrin sameynteeda leh, suurta galna ka dhigi karta in dowladda Kenya ay marin-habaabiso bulshada Soomaaliyeed, waxaana muddooyinkii dambe soo batay Khubaro iyo aqoonyahanno Kenyaan ah oo wacyi-gelin Media-yaha u marinaayay Bulshadooda, kuna dhiirrigelinaayay in ay difaacdaan baddooda.
3) Kaalinta warbaahinta ee Difaaca Badda.
Warbaahinta ka howlgasha Soomaaliya waxay ku dhibban-yihiin in ay helaan khubaro cilmigan bartay oo aqoon durugsan u leh, si faah-faahsanna warbaahinta ula hadla, taasna waxey noqon kartaa fursad kale oo ay DFS ka sameyn karto halkaas si shacabka Soomaaliyeed loogu sheego in ay badda iyaga leeyihiin ayna tahay in ay difaacdaan.
4) Abaabulka Qareenadii ka soo qeyb-qaatay kiiskan, waa fursad dahabi ah oo mar kale ay Dowladu ku xoojin karto qareennadii difaacay Badda ee kiiska halkan soo gaarsiiyay , hadii ay dowladda isku keentana dad badan aaminsanyihiin in Soomaaliya guul gaari karto.
5) Kabaaraan dagidda in saameyn uusan ku yeelan Ololaha Doorashadda Somaliya, inkastoo maxkamadda ay go’aamisay in kiiskan la qaado June-2020, hadana waxaa la rumeysan yahay in waqtigaas ay tahay Xilliga ololaha, waa Fursad kale oo DFS ay ugu Faa’iideysan karto in ay sameyso qorshe cad oo suurta galinaya in saameyn iaku yeelan ololaha doorashada iyo kiiska Badda, waana arrinta dowladda Kenya ay u aragto in fursad dahabi ah ay u tahay, isla markaana suuratagalin karta in DFS ay ogolaato wada-hadal ku aadan kiiskaas.
6) Wadajirta DFS iyo Maamul Gobaleedyada, muhiimad gaar ah ayuu u leeyahay DFS in beesha caalamka iyo kenyaba ay arkaan Soomaaliya oo wada socoto, hal mooqifna leh, waxaana lagu gaari karaa in dowladdu ay isku keento una muujiso xushmad iyo dulqaad maamul goboleedyada, ayadoo ka billaabeyso Jubbaland oo lagu xanto in ay Kenya garab siiso.
7) in ciidamada Kenya lagu badalo ciidamo Jabuutiyaan ah, waa mid isku soo jiidi karto dowladda Farmaajo iyo shacabkeeda, waxuuna noqon karaa go’aan ay si isku mid ah usoo dhoweeyaan ummadda Soomaaliyeed, Kenyana ku noqon karo caqabad kale oo rajo xumo u horseeda.
W/Q:- Xasan Kaahiye
Previous articleWafdi ka socda DFS oo gaaray Dhuusamareeb
Next articleWaa sidee saakay xaaladda Degmada Afgooye?